Fitsaboana Factory |China Treatment Manufacturers and Suppliers
Ny milina fampihenana cellulite 3D portable portable farany ho an'ny fanalefahana ny vatana sy ny fanandratana tarehy
3D-roller dia mampiasa fitambaran'ny vibration sy fanerena mazava tsara, izay miteraka hetsika mahery vaika amin'ny lalan-drà.
mivoaka ny vatanao.Ny fanesorana ny vokatry ny "hodi-boasary" dia matetika tsikaritra avy hatrany ary mitohy mihatsara
tsirairay fitsaboana.Ny asan'ny vaskular entanin'ity fitsaboana ity koa dia miteraka fivoahana ranon-javatra, fampihenana ny ketrona.
kles ary mamerina indray ny famirapiratana tanora amin'ny hoditrao.Izany dia tsy manala ny santimetatra, ny tonony ary ny sculpt ny vatanao, fa izany koa
manome fampihenana ny mamaivay ihany koa.Ny faritra ifantohan'ny olona indrindra dia ny fe, vodiny, nono ary
Salon mampiasa milina hatsaran-tarehy Co2 oxygen rf fitarafana ny hoditra rejuvenation amin'ny exfoliation infusion fitaovana tarehy
Inona no atao hoe oksizenina co2?
Ny oksizenina Co2 dia maka ny aingam-panahy avy amin'ny loharano mafana voajanahary fantatra amin'ny fampidirana oksizenina ho an'ny hoditra.Amin'ny alàlan'ny fanahafana an'io fiantraikany io, ny co2oxygen dia miteraka valim-panontaniana amin'ny vatana izay mandefa oksizenina any amin'ny faritra voatsabo.Mandritra izany fotoana izany, ny co2oxygen dia manala ny hoditra ary mamorona tontolo tsara indrindra ho an'ny fampidirana otrikaina ilaina mandritra sy aorian'ny fitsaboana.Ny fahafahana manasokajy ny Radio Frequency dia mandrisika ny fanavaozana ny collagène sy ny elastin ao amin'ny sosona dermis, izay mitarika ho amin'ny hoditra malefaka sy henjana ary mihena ny tsipika sy ny ketrona.
Ny Therapy O2tofacial dia mifoka rivotra avy amin'ny atmosfera amin'ny alàlan'ny mpamokatra ion oksizenina mba hamokarana oksizenina madio sy manodidina ny 3 tapitrisa.
Oksizenina sy vy novokarina tamin'izany fomba izany ary natokana ho an'ny hoditra amin'ny alàlan'ny saron-tava lehibe miendrika dome mba hamelombelona ny hoditra.
programam-pitantanana mampisondrotra ny fahavelomana izany
Ny fitsaboana O2tofacial dia mampiasa sivana adsorption manokana mba hisintonana azota amin'ny rivotra ary hanivana oksizenina madio.
Satria azo ampiasaina izy io, dia mahomby kokoa amin'ny hatsaran-tarehy.Ary ny ion ratsy izay vokarina miaraka amin'izao fotoana izao mba
manampy ny hoditra miaina.Izy io dia omena amin'ny vatana mba hamoahana oksizenina mavitrika ary mandrisika ny fanavaozana ny sela hoditra.
Mpanadihady hoditra matihanina Magic Mirror Facial Skin Analysis Machine 3D
Magic Mirror Max (M9) dia fitambarana fitaovana elektronika, milina mazava tsara, optika mitambatra ary sary nomerika amin'ny iray amin'ireo fitaovana fitiliana hoditra teknolojia avo lenta.Amin'ny alalan'ny RGB, UV sy PL spectral imaging sy ny famakafakana sary teknolojia, maka famaritana avo ny matihanina sary, miara-miasa amin'ny angon-drakitra lehibe fanadihadiana sy ny angona lalina fianarana asa, Smart Magic Mirror dia afaka manompo ho an'ny matihanina fikarohana sy ny fanadihadiana siantifika amin'ny 10 epiderme sy dermis hoditra olana
Fitaovana hatsaran-tarehy pdt-tarihan'ny hoditra fanavaozana ny akne fitsaboana pdt milina nitarika hazavana fitsaboana kilasy fitsaboana
Amin'ny maha-teknolojia mandroso indrindra, ny rafitra fanavaozana hoditra PDT dia mampiasa photobiology LED tany am-boalohany miaraka amin'ny fahadiovan'ny hazavana 99% mba hiasa amin'ny tavy hoditra kendrena hampiakatra ny asan'ny sela sy hanatsarana ny metabolism.Izy io dia teknolojia manokana amin'ny fampitana famantarana mazava.Ny fitsaboana LED dia tsy misy fiantraikany mafana, tsy misy ratra ary tsy mahazo aina amin'ny hoditra, izay tsy azo tratrarina amin'ny vokatra fikarakarana hoditra mahazatra.
Ny fitsaboana jiro LED dia hita fa mahomby amin'ny fitsaboana ny lafiny maro amin'ny fahanteran'ny hoditra.Ny fanadihadiana marobe dia naneho ny fanatsarana ny ketrona tsara, ny hyperpigmentation mottled, ny hamafin'ny tactile ary ny fahaleovan-tena.Ireo vokatra ireo dia tohanan'ny famokarana collagen sy ny fitomboan'ny fitomboana.
Masinina Massager Body Massager G5 Vibrating Body Cellulite
Ity fitaovana ity dia mifototra amin'ny fitsipiky ny vibration fitsaboana ara-batana.Ny angovo vibration avoakan'ny probes miendrika isan-karazany dia afaka mamongotra ny sosona tavy ary manafaingana ny fikorianan'ny ra mba hahazoana vokatra manalefaka ny vatana.Amin'izay fotoana izay ihany koa dia afaka manamaivana ny fihenjanana sy ny havizanana ny hozatra, ary manala ny puffiness.
Fitaovana aquafacial manala akne sy manala loha mainty
Ny milina fikarakarana hoditra 6 amin'ny 1 vaovao amin'ny alàlan'ny mpamokatra h2 o2 dia mahatonga ny rano voadio ho rano hidrôzenina sy oksizenina, ny hoditry ny hoditra dia afaka mamokatra molekiola H2, mba hahafahan'ny sela molekiola rano miditra haingana amin'ny dermis.Mba hahatratrarana ny vokatry ny fanavaozana ny hoditra sy ny fanadiovana, omeo endrika vaovao ianao!
Amin'ny alàlan'ny fananganana vacuum suction, ny bubbles micro dia mifangaro amin'ny fitaovana mahavelona, ​​​​amin'ny alàlan'ny tendrony miolikolika natao manokana miasa mivantana amin'ny hoditra, izay afaka mitazona ireo bubbles bitika mikasika ny hoditra mandritra ny fotoana maharitra, manala sy manosotra ireo sela maty amin'ny hoditra ambony. .Miaraka amin'ny vacuum suction, ny micro bubbles dia afaka manala ny loto sy ny poti-koditra maty, ny tasy, manome sakafo maharitra ho an'ny hoditra, mahatonga ny hoditra hamandoana kokoa sy malama.
FDA sy TUV Medical CE dia nankatoavin'ny Fractional CO2 laser ho an'ny fanesorana akne sy famerenana ny hoditra
9 in1 Hydro Facial Diamond Peel milina fanesorana akne
Multifunctional Hydro facial milina mampiasa vacuum suction fomba fehezin'ny dingana manan-tsaina, amin'ny alalan'ny fitambaran'ny vokatra sy ny fitaovana, lalina fanadiovana ny hoditra sy ny masontsivana ny tandroka, akne, blackheads sy ny loto hafa ao anatin'ny fotoana fohy.Ary hanatsara ny lalina hisakana ny fiasan'ireny vokatra sakafo, hampiroborobo ny mason-koditra manify, malama hoditra, mampitombo ny hamandoana ny hoditra, ary manao ny hoditra Whitening, moisturizing sy tsara texture.
Hydrofacial mety amin'ny karazana hoditra rehetra, tsy misy invasive, tsy misy fandidiana, tsy misy fiatoana, manome ny hoditrao salama avy ao anatiny ka hatrany ivelany.
Sary ara-teknika ho an'ny tobim-pitsaboana momba ny HydraDermabrasion, ny tarehy ankafizin'ny olo-malaza mba hahazoana sy hihazonana ny fahasalamana, io no hany fomba fiasa manambatra ny fanadiovana, ny exfoliation, ny fitrandrahana, ny hydration ary ny fiarovana antioxidant ao anatin'ny iray.Manatsara ny ketrona, tsipika foine, blackheads & akne.
Fractional Microneedle RF fanesorana akne strecth marika fanesorana Machine
Micro-fanjaitra fractional RF milina mitambatra banga adsorption teknolojia, banga suction azo ahitsy araka ny isan-karazany ny marary mitaky, dia afaka manampy angovo fanaterana marina kokoa ao amin'ny faritra fitsaboana, mba hahazoana mahomby kokoa ketrona fanesorana, hoditra Whitening, akne fanesorana sy mihinjitra marika fanesorana.
10/25/64 micro fanjaitra tendron'ny ravin afaka hanitsy ny halalin'ny fanjaitra, fanjaitra matetika, mamorona fanafanana antontan-taratasy ho any amin'ny faritra fitsaboana, vaky amin'ny alalan'ny epidermis sakana, manome mesoderma tissue fitsaboana marina.
Fitaovana SHR IPL portable ho an'ny fanesorana akne sy fanesorana pigment
Ny teknolojia avo lenta pulse light (IPL) dia manolotra ny halavan'ny onjam-pahazavana isan-karazany ho an'ny vahaolana fitsaboana tsy misy invasive sy marina mba hahazoana fahombiazana lehibe miaraka amin'ny firaketana klinika be dia be.Ny hazavana dia afaka miditra amin'ny dermis mankany amin'ny tavy kendrena, izay hopotehin'ny hafanana maivana, avy eo dia mihinana sy manala ny vatana amin'ny alàlan'ny metabolism.
Intense pulse light (IPL) miaraka amin'ny teknolojia Radio Frequency (RF), izay mety hahatonga ny angovo maivana ho lalina kokoa eo ambanin'ny epiderme, manapotika ny sela pathological ary mandrisika ny collagène mba hitombo indray, hahatsapa ho fotsy hoditra ary elastika kokoa tsy misy fiantraikany.
Ny fanesorana volo Super (SHR) dia mahomby kokoa amin'ny haben'ny teboka 15x50mm noho ny fitsaboana teboka mahazatra.Izany no fomba tsara indrindra ho an'ny faritra midadasika ny fitsaboana volo tsy misy fanaintainana.
Ny teknolojia pulse Optimal Premium (OPT) dia manolotra angovo misesy sy mitovitovy, toy ny maodely top-hat tonga lafatra, manolotra fomba fitsaboana azo antoka kokoa sy haingana kokoa tsy misy fiatoana.
Smart Skin famakafakana fitaovana aquafacial ho an'ny fanesorana akne sy hoditry ny tarehy
Ny rafitra fitantanana hoditra manga manga manga dia manangona sary antsipirihan'ny hoditra amin'ny alàlan'ny fakan-tsary micro-range 10 tapitrisa pixel avo lenta miaraka amin'ny teknolojia fakan-tsary telo-spectral, amin'ny alàlan'ny diagnostika marani-tsaina sy ny famakafakana ny maotera fototra artifisialy, zavatra tsara 8 refy mba hahitana. olana amin'ny hoditra, ary araka ny valin'ny fitiliana ny fandaharana manokana momba ny hatsaran-tarehy manokana sy ny soso-kevitra manan-tsaina momba ny vokatra fikarakarana hoditra matihanina;Miaraka amin'ny teknikan'ny" antsy angady ultrasonika "," bubble "," onja ultrasonic "," onjam-peo volamena "," fanamboarana ranomandry "sy ny sisa, ireo fiasa enina avo lenta momba ny hatsaran-tarehy dia mitantana tanteraka ny hoditra, manambatra ny vokatry ny AI. Diagnose hoditra miaraka amin'ny vokatra fikarakarana hoditra sy zavatra hafa momba ny fikarakarana hoditra, ary manamboatra fitaovana mitambatra mufti ho an'ny fitiliana sy fitantanana ny hoditra.
123456Manaraka >>> Pejy 1/8